बागलुङ बजारको ढल निकासको लागि डिपिआर सार्वजनिक::Online News Portal from State No. 4
बागलुङ बजारको ढल निकासको लागि डिपिआर सार्वजनिक
बागलुङ, १४ साउन – तपाईको शौचालय भरियो ? भरिएको भए सेफ्टीट्यांकी सफाई कंपनीलाई फोन गरेर २५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्छ । सेफ्टी ट्यांकी सफाई गर्दा वरपरका घरमा दुर्गन्धपनि फैलिन्छ । तर अब त्यो समस्या धेरै समय रहदैन । बागलुङ नगरपालिकाले घरघरमा बनाइएका सेफ्टी ट्यांकीबाट निस्कने फोहोरलाई सफाईको नाउँमा खोला, नदी र सार्वजनिक स्थानमा फाल्न नदिने योजना समेत बनाएको छ । मानवजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्न पहिलो पटक बागलुङ नगरपालिकामा ढल निकासको काम गरिने भएको छ । संघिय सरकारको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना मार्फत सफाईको काम थालिएको हो । यो व्यवस्था पछि सार्वजनिक स्थानमा ढल बिर्सजन गर्न रोक लगाईनेछ ।
नगरपालिकाको आग्रह पछि काठमाण्डौको एसडी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेनसी मार्फत डिपिआर निर्माण गरेर ढल निकासको काम थाल्न लागिएको नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले बताए । नगरको मुख्य बजार रहेको वडा नं. १, २, ३ र ४ मा ढल निकासको काम गरिनेछ । यस अघि घरघरको सेफ्टी ट्यांकीबाट संकलन गरेर फोहोर फाल्ने पद्दती यो व्यवस्था पछि अन्त्य हुनेछ ।
ढल निकासका लागि व्यवस्थित ‘ट्रिटमेन्ट प्लान’ बनाईने पौडेलले बताए । ‘ढललाई कम्तिमा ५ वटा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट मार्फत जैबिक मलको रुपमा उत्पादन गरिनेछ’ उनले भने, ‘खोला र नदीमा फोहोर बग्ने क्रम रोकेर जैबिक मल बनाउँदा उत्पादनमै लगाउन सकिन्छ ।’ जैबिक मल बनाउँदा फस्फोरसको मात्रा बढाउन सकिने इन्जिनियर कान्छाकाजी सिलवालले बताए । नगरक्षेत्रको ३२ हजार जनसंख्यालाई लक्षित गरेर पहिलो चरणको ढलनिकास गरिन लागिएको हो । त्यसका लागि दुइ किमी मुख्य ढल र ८ किमी शाखा ढल निर्माणको सर्भे गरिसकिएको हो । डिपिआरको प्रारम्भिक प्रतिबेदनमा सरोकारवालाले छलफल गरेपछि पुन बिस्तृत सर्भेक्षण गरेर डिपिआर बुझाउन सुझाव दिएको नगरपालिकाका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले बताए ।
झण्डै २ अर्व खर्च हुने यो योजना बनाउन नगरपालिकाले अन्य लगानीका बाटो पनि खोजी गरिरहेको छ । ६ महिना अघि नगरपालिकाले विश्व बैंकको सहयोगमा शहरी शासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार कार्यक्रमका लागि पनि हस्ताक्षर गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमले खानेपानी, ढल निकास र चक्रपथ निर्माणमा लगानी गर्ने सहमति छ । ६ बर्ष अघि पनि विश्व बैंकको सहयोगमा यो कार्यक्रम संचालन भएको थियो । त्यतिबेला ढल निकासको काम भएको थिएन । ‘चक्रपथको ट्रयाक खोल्ने र खानेपानीका लागि काम भएका थिए’ पौडेलले भने, ‘व्यवस्थित ढल निकासका लागि भने अब काम गरिनेछ ।’ बैंकले नेपाल सरकारसँग गरेको १६ अर्व रुपैयाँको सहुलियत ऋण सम्झौता मध्येबाट नेपालका २१ वटा नगरपालिकामा ढल निकासको काम हुनेछ । उक्त कार्यक्रमले पनि यो अभियानलाई सहयोग पुग्नेछ ।
बैंकको सहुलियत ऋणमा प्राप्त हुने १६ अर्व रुपैयाँलाई आबस्यकताको आधारमा बजेट बाँडफाँड हुनेछ । ‘मन्त्रालयले नगरपालिका छनौट गरेर बजेट माग गरेको छ’ मन्त्रालयका ईन्जिनियर सबिन कर्माचार्यले भने, ‘कार्यक्रमको सम्झौतापछि शहरी शासकीय सुधार कार्यक्रम शुरु हुनेछ ।’ यो कार्यक्रम मार्फत खानेपानी, ढल निकास, सडक तथा पूर्वाधारनिर्माण र व्यवस्थापकीय सुधारको कार्यक्रम गरिनेछ । कार्यक्रमले ६ बर्ष अघि बागलुङ नगरपालिकामा २३ करोड लगानी गरेको थियो । उक्त लगानीबाट चक्रपथ, ढल निकास र सरसफाईको प्रारम्भिक काम भएको थियो । चक्रपथको ट्रयाक खुलेर केही खण्डमा कालोपत्रे र ढलान समेत भएको छ । बाहिरी फोहोर व्यवस्थपानका लागि भने वडा नं. १ को खुतुर्केमा अस्थायी डम्पिङ छ ।